မိမိဇာစ်မြစ်ကိုမိမိမသိသောမြန်မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်စေရန် အီရန်နိုင်ငံက အဆိုပြုချက် (၃)ရပ် တင်သွင်း
တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို မခွဲမခြား မဖိမနှိပ်ဘဲ ပညာသင်ခွင့်လေး ပေးကြည့်လိုက်ပါ »
KTun Tha’s photo.
MYANMAR WHO IS INCAUTIOUS ABOUT THEIR OWN ORIGIN
ယခုတလောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုလားမုန်းတီးရေုးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ထွန်းနေသောအချိန်အခါ လည်းဖြစ်သည်။ဒါ ပေမယ့် ကုလား၏အဓိပ္ပါယ် နှင့် ဗုဒ္ဓ ၏အဓိပ္ပါယ်၊အနှစ်သာရကိုသိပါသလား လိုမေးလျင်တိကျသောအဖြေပေးနိုင်သူမရှိသလောက် ဖြစ်သည်ကိုမည့်သူမျှငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုလားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတစ်လုံးတည်းတောင့်မသုံးဘဲ လီးကုလား၊ စောက် ကုလား၊အမေလိုးကု လားစသည်ဆဲဆိုတဲ့စကားလုံးများနှင့် တွဲဖက်သုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ထိုသို့ဆဲဆို ခြင်းဖြင့် မိမိကိုးကွယ်သောဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဆဲရာရောက်သည်ကိုပင်သတိမရှိကြဘူး။
ကမ္ဘာလူဦးရေးပြန့်ပွားမူ/ပထ၀ီအနေအထားနှင့်နယ်ချဲ့တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးသဘောအရကုလားလူမျီုးများသည် မွေးရာပါကံမ ကောင်းလိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမွေးဖွားလာသော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမွေးဖွားလာသူဘယ်ကုလားမျှမိမိကိုမိမိမြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားလာခြင်းအတွက်မိမိကိုးကွယ်သောဘုရားကိုကျေးဇူးတင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကုလားဆိုသည်မှာ ကုလပုတ္တ ဆိုသော(ဗြဟ်မီ)စကားလုံးမှဆင်းသက်လာပြီး ကုလ် နှင့် ပုတ္တ တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ် သည်။အဓိပ္ပါယ်မှာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောသူ(မျီုးကောင်းမျီုးသန့်၊ ဘုရားဖြစ်တန်သောသူ၊အလွာအတန်းစားမြင့်သူ၊အလုံးစုံ)ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဥပမာ ကုလသမဂ္ဂ=ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးသမဂ္ဂ(ရုံး)။ ကုလဇီဝ=ဘ၀တစ်ခုလုံး စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ် စွာဘုရားကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်မျီုးဆက်သုံးဆက်ထိထိမင်းမျီုးမင်းနွယ်ကုလားလူမျီုးသာဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ချက်နှင့်ကုလားဆိုတဲ့စကားလုံး၏အနှစ်သာရအရကုလားလူမျီုးသာလျင်ဘု ရားဖြစ်နိုင်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောမျီုးကောင်းမျီုးသန့်ပြည့်စုံသူပါရမီပြည့်မှဘုရားဖြစ်မည်၊ ဘုရားဖြစ်ရန်ပထမအဆင့်သည်မျီုးကောင်းမျီုးသန့်ဖြစ်ရသည် အတွက်ကုလားဖြစ်ရမည်။
ဒါကြောင့်မြန်မာလူမျီုးတစ်ဦးဘုန်းကြီးဝတ်လျင်မြန်မာ့နာမည်များဖြစ်သော မြင့်နိုင်၊ ၀င်နိုင်ဦးစ သည်တို့ကိုစွန့်လွတ်ပြီး ၀ီရသူ (Veera=Hero ), ဥတ္တမ(Uttam=Better ) ပညာဝရ(Panyawar= စာတတ်ပေတတ်) စသည်ဖြင့်ကုလားနာမည်တစ်ခုခုဦးစွာမှည့်ခေါ်ရသည်။မြန်မာ့နာမည်ဖြင့်ဘုန်း ကြီးတောင့်မ၀တ်နိုင်သည်အတွက်ကုလား ဟန်ဆောင်ပြီးဘုန်းကြီးဝတ်ရသည်သဘောပါဘဲ။ ကုလားကိုဆဲလျင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစွန့်လွတ်ရန်မှအပအခြားမရှိပါဘူး။
မြန်မာစာပေသည်မြန်မာလူမျီုးတွေကထီတွင်ထားသောစာပေမဟုတ်ဘဲ ကုလားဗြဟ်မီစာပေမှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားပြီး အ ချောင်းကိုအလုံးသို့၎င်း၊စက်ဝိုင်းခြမ်းနှင့်ဘဲဥပုံကိုစက်ဝိုင်းသို့၎င်း၊ ၊ခေါင်းရှည်ကိုခေါင်းတိုသို့ ၎င်းပြောင်းယူခြင်းသာဖြစ်သည်။ မြန်မာ့စကားသည်လည်း ၆၀%ကျော် ကုလားစကားမှယူထားပြီး Sha,Sa(ရှ နှင့် စ)အသံကို Tha(သ)အသံဖြင့်၎င်း၊ရှေ့တွင် သဝေတို မပါဘဲအနောက်တွင်အသတ်ဖြင့်ဆုံးသောစကားလုံးများကိုအသတ်ဖြုတ်အသံဖြင့်၎င်းပြောင်း ယူခြင်းသာဖြစ်သည်။
Rahul = ရာဟုလ
Ministry of Tourism ကတရားဝင်ကြော်ငြာထားသည်မှာမြန်မာယဉ်ကျေးမူသည် Indo China (ကုလား/တရုပ် ဖက်စပ်) ယဉ်ကျေးမူဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်မြန်မာအ၀တ်အစားသည် ကုလားကဲ့သို့ မလုံခြုံဘဲ၊တရုပ်ကဲ့သို့လည်းအလှန်မဟုတ်ပေ။ မြန်မာလူမျီုးတစ်ချို့နှင့် ၀ိနည်းနှင့်မညီသော သင်္ကန်းဝတ်တစ်ချို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နိဗ္ဗာန်တွင်ပင်စိတ်ညစ်နေရမည်မှာ သေချာပါသည်။
ကျေးဇူးရှင်ကုလားကိုစော်ကားနေသည်အပြင်ဘုရားကိုပါဆဲဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာပေအကရာနှင့်ဗျဉ်းတို့ကိုကုလားစာပေနှင့်အောက်တွင်နှိုင်းယှဉ်ပြထားသည်။ မြန်မာစာပေတွင်(အ) ဆိုတဲ့ သရ ကိုဗျည်းနှင့်တွဲထားသည်မှလွဲပြီးအစီစဉ်ကအစထပ်တူတူညိသည်။ ဗဟုသုတကြွယ်ဝပါစေ။
This entry was posted on May 20, 2013 at 3:22 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.